CAN Info Tech -2020 Pokhara Interview Archives - NepalDut NepalDut
पोखराको न्युरोडमा रहेको कस्मिक कम्प्युटिङ सोलुसन्स यस क्षेत्रको परिचित नाम हो । सोलुसन्सले हाइ रेन्जका कम्प्युटर, ल्यापटपसहित सूचना तथा प्रविधिका सामान बिक्री गर्दै आएको छ । कस्मिकले बिक्रीपछिको सेवालाई प्राथमिकता दिएकाले सेवाग्राहीको मन जितेको छ । पोखरामा आयोजित दसौं संस्करणको क्यान इन्फोटेकमा कस्मिकले एमएसआई ब्राण्डका नयाँ उत्पादन आरटिएक्स सिरिजका २०७०, २०८० ग्राफिक्स कार्ड, इन्टेल नाइन्थ जेनेरेसन कोर आइनाइन, टप सिरिजको प्रोसेसरयुक्त कम्प्युटर बिक्री तथा प्रदर्शनीमा आदि प्रदर्शनीमा राखेको छ ।… पुरा पढौ
पोखरामा १०औं ‘क्यान इन्फोटेक’ सोमबारबाट सुरु भएको छ । मेला कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कास्की शाखाले आयोजना गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिना तथा कानुनी व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानले इन्फोटेकको शुभारम्भ गरे । उक्त अवसरमा मन्त्री चुमानले २१औं सताब्दीलाई सूचना प्रविधिले नेतृत्व गर्दै आइरहेको बताए । सरकारले सूचना तथा प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै पोखरामा प्रदेश आइटी पार्क बनाउन लागेको जानकारी दिए । क्यान महासंघ नेपालका अध्यक्ष हेमन्त चौरासियाले क्यानले… पुरा पढौ
क्यान कास्की काठमाडौंपछि सबैभन्दा क्रियाशील शाखा हो । क्यान कास्कीले आयोजना गर्ने क्यान इन्फोटेक यसपालि १० औं संस्करणमा आइपुगेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायनेटले यसपालिको मेलाको टाइटल स्पोन्सर गरेको छ । यसै क्रममा भायानेट पोखरा शाखा प्रवन्धक कृष्ण सुवेदी सँग गरिएको कुराकानी । टाइटल स्पोन्सरको रुपमा पोखरा आगमनलाई कसरी लिनुभएको छ ? क्यान इन्फोटेक प्रविधी प्रेमीका लागि महत्वपूर्ण फोरम हो । प्रबिधीको क्षेत्रमा क्यान महासंघले जुन लोकप्रियता हासिल गरेको… पुरा पढौ
गुणानिधि पाण्डे क्यान महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष हुन् । २२ वर्षदेखि पाण्डे कम्युटर सञ्चालन गरिरहेका उनी भायानेट क्यान इन्फोटेक इन एसोसियसन विफ आइएमइ पे २०१९ को अतिथि सत्कार उपसमिति संयोजक हुन् । क्यानको मेला र सूचना, प्रविधि व्यवसायबारे उनीसँग गरिएको कुराकानी : क्यान महासंघ कास्कीले पहिलोदेखि ९ औं मेला गरिसकेको छ । १० औं महोत्सवको तयारी हुँदै गर्दा यो बीचमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? क्यान महासंघ कास्कीमा अहिलेसम्म संस्थापकहरुले नै… पुरा पढौ
क्यान महासंघ कास्कीको आयोजनामा दसौं संस्करणको इन्फोटेक हुँदैछ । पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा फागुन १८ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने इन्फोटेकसँग केन्द्रित रहेर क्यान महासंघ कास्कीका सचिव विकास भुर्तेलसँग गरिएको कुराकानी : इन्फोटेकको तयारी कस्तो छ ? फागुन १८ देखि २४ गतेसम्म पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा इन्फोटेक हुँदैछ । इन्फोटेकको मिति नजिकिएको छ । क्यान कास्कीका अध्यक्ष युवराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विभिन्न २७ वटा उपसमितिले आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गरिसकेका… पुरा पढौ